Sunday September 06, 2020 - 13:48:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
sidaa darteed waxa muuqata in Madaxweyne Farmaajo intii uu siyaasadda ka yaqaannay oo uu Villa Somalia la fadhiyey ay bahashu ka sara martay, ka dib markii uu oggolaaday in siyaasiintii Maamul goboleedyada ahaa oo la shiraya qaybo ka mid ah golihii wakiillada sida Aqalka Sare iyo asxaabtii mucaaradka ahayd, hawshaah oo ahayd tii uu isagu lahaa maaddaama uu yahay sida nidaamkooda ku cad in uu kala ilaaliya ama u odayeeya hay'adaha dawliga (checks and balances) ah ee kala duwan ee xukuummadda uuna yahay madaxweyne maamuuseed (cermonial president).
Taas oo uu Farmaajo ka gaabiyey ayaa imminka waxa muuqata in hawshiisii ay cid kale wadato isna uu markhaati ka yahay. Inkasta oo aanan anigu ka mid ahay dadka aan la dhacsanayn qaabka dawliga ah ee hadda Soomaaliya laga sheego, haddana nidaamka ay degsadeen ayaa ah sidaa aan sheegay, waayo hadda hay'adaha dawliga ah ee dalka ka jiri lahaa waxa maqan laba hay'adood oo hawshoodii laalaln tahay, waan hay'adda fulinta (executive) iyo tii Garsoorka (judiciary), labadana Farmaajaa isku haya booskoodii.
Taasina waa tan keentay in isaga turubka lagu rogo, sababta oo ah nimankan ka soo horjeeda in ay wax akhriyeen ayaa muuqata isna wax dhegta loogu sheego, oo uusan hoosba u eegin waxa u qoran oo uu madaxweyne ku yahay, waaana waxa hoday maanta.
Dadka Tigreega oo bilaabay in ay gaajo udhintaan iyo warar kale.
Weerar Askari Yugaandheys ah lagu dilay oo ka dhacay Sh/hoose iyo Warar kale.
Kolonyo katirsan ciidamada AMISOM oo lagu weeraray Sh/hoose iyo warar kale.
Garoonka diyaaradaha Baydhabo oo weerar madaafiic ah lagu qaaday iyo warar kale.
Al Shabaab oo Weeraro ku miray saldhigyo ay ciidamada Kenya iyo Itoobiya ku leeyihiin gobolka Gedo iyo Warar kale.